DHEGAYSO: Soomaliland oo sheegtay inuu Bur-buray Wadahadalkii Nabadda ee Tukaraq iyo Xiisada cusub ee dagaal | KALSHAALE
DHEGAYSO: Soomaliland oo sheegtay inuu Bur-buray Wadahadalkii Nabadda ee Tukaraq iyo Xiisada cusub ee dagaal
Oct 10, 2018 - 7 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Iyadoo oo Ciidamada Somaliland iyo Puntland dhexmaray dagaal Qorshaysan oo gaystay Khasaare kala duwan, ayaa Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somaliland sheegay in uu Bur buray wada hadalkii nabadda ee Tukarraq.
Xildhibaan Axmed Maxamed ( Nac-nac) ayaa waxbo kama jiraan ku sheegay eedeymo kaga yimid dhanka Puntland oo la xiriirta in dagaalka ay ciidankoodu ku horreeyeen.
Wuxuu sheegay in dagaalka uu yimid markii weerar gaadmo ah ay kusoo qaadeen ciidamada Puntland ee ku sugan aagga hore ee jiidaha dagaalka.
Xildhibaanka ayaa sheegay in ay meesha ka baxeen dedaalladii nabadda oo beesha caalamka ay ka dhex waddey Labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland, Wuxuuna sheegay in Ciidanka Somaliland Hadii ay Ruqaansadaan ay Garoowe dul tegi doonaan.
Somali muuqal bani aadam ayeey leedahy lkn dhaqandugaag ayeey leedhy
Wariyaha miyaa magaca qaldey mise waa sax oo sheeko Tukoraq ayaa wali taagan.
Gaas ma wuxuu rabaa inuu dhaho dagaal ayaa socdo, ma codeynkaraan Odayaasha deegaanka Puntland.
Mise wuxuu is tusahayaa Wafdiga Xamar ka yimid.
Waligey ma arkin Tuulo sidaas u yar, oo hadana sidaas magaceedu u saameeyo Soomaaliya dacaladeeda.
-Ma kista Koontoroolkaa
-Ma difaaca Garowaa
-Ma Tuuladii ugu dambeysay Soolbaa (oo meesha waxaa ka baxeyso sheegashadii Fileka)
Wali waa suaalaha aan weydiiyo maskaxdeydaa ilaa qarnigii Huganta.
Adigu xageed ku argtay ssdf iyo khaatumo. Dagaal dheer gala waxaad waa maalin ama 2 saac kadib xafadahooda. Aadan you remember ssdf the war with somali government they was loosers. Ssdf war with kacaan boys.
Xildhibaankaas Xaal halaga qaado 5 mar ayuu ku cel celiyey – WAA YAACAHAYAAN, waa Yaacahayaan. War Cidda waa loo Qariyaa Orodka.
Xantii iyo Media keenay,
Cuqubo halkii lagu galay caw ku hurudaaye caruurtay ka laysaa ninkii caano baas dhamaye? Jam somland iyo shacabkeeda ninkii gardaraystaa kama macaasho ee is habeeya oo shicibkoow shicib loo taliyo noqda oon siyaasadda ku milmin khayrka ku jira inaad ahaataan shicib ka xora siyaasiga qaldan ama buka lahaada dhago wax maqla oo nadiifa
Beesha Ugaadhsatada ah ee Majeerteen,waxay dacwad la taaganyihiin xafiisyada gaalada eee Nairobi.Iyo waliba ku Carabta ee Emaaraatka.
Dacwadii ay ka gaynjireen Galmudug,ayaa taala Xafiisyada Nairobi ee Reer Galbeedka .Dacwadii ay ka gaynjireen Xasan sheekh ayaa iyaduna taala.Dacwadii ayka geeyeen Maamulka Hargeisa ayaa iyadna halkaa ka socota.Waxaa haatan socda dacwadii ay ka geeyeen dawlada Khayre.
Gaaladu dadka noocaasi ah ee ruufiyaanka ah aadbay u soo dhaweeyaan oo way ku shaqaysteen iyagana wax ay cunaan ayay siiyaan.
Dadkani waxay quutaan dhiiga Somalida tan iyo wakhtigii uu Talyaanigu wadanka soo galay.
Somaliland waa inay Garoowe tagaan oo hadalka soo afjiraan.Somaliland waa inay cuskataa inay meesha Garoowe ay tahay meel Somalida xanuunku ah oo ay miiska soo saarta dhaqamada siyaasadeed ee ka jiran meesha ay Mooryaantu ku nooshahay ee la yidhaa Garoowe.